श्रावण २२, २०७५ तस्बिर : कविन अधिकारी
काठमाडौँ — २७ दिनको अनशनले कमजोर भएका डा. गोविन्द केसीको १३ दिनसम्म शिक्षण अस्पतालमा उपचार भयो । सामान्य उपचारले नधानेपछि उनलाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयु)मा समेत ६ दिन राखियो । जब तंग्रिन थाले, तब उनी मंगलबार डिस्चार्ज भए ।
डिस्चार्जका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनको मुहारमा खुसी देखिएन । थियो त, केबल आशंका, चिन्ता र केही आक्रोश पनि । उनले आफ्नो अनशन तोडाउने क्रममा भएका सम्झौता, सहमति कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरे ।
सहमति लागू नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसम्म दिन भ्याए । लगत्तै भक्कानिँदै उनले भने, 'लामो समय अनशन बसेँ, बिरामी जाँच्न पाइनँ, फेरि १६ औं पटक अनशन बस्नु पर्ने हो कि !' आँसु रोक्न नकसेपछि डा.केसी पुछ्नतिर लागेपछि केहीबेर पत्रकार सम्मेलन नै सुनसान बन्न पुग्यो ।
डा. केसी स्वास्थ्य, शिक्षा सुधारको माग गत असार १६ देखि १५ औं पटकको अनशनमा थिए । उनले जुम्ला र काठमाडौंमा गरी २७ दिन लामो अनशन बसेपछि साउन १० गते राति सहमति गराउन सरकार बाध्य भएको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १६:४१